Ch 13 Matthew – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Matio / Ch 13 Matthew
13:1 Amin'izany andro izany, Jesosy, niala an-trano, nipetraka teo amoron-dranomasina.
13:2 Ary toy izany vahoaka be niangona teo aminy ireo dia niakatra teo an-tsambokely dia nipetraka. Ary ny vahoaka iray manontolo teny amoron-dranomasina.
13:3 Ary Izy nanao zavatra maro ho azy ireo fanoharana, nanao hoe:: "Indro, ny mpamafy nivoaka mba hamafy voa.
13:4 Ary raha namafy, sasany dia voafafy teny amoron-dalana, ary ny voro-manidina ka nihinana azy.
13:5 Ary ny sasany dia voafafy tao amin'ny toerana be vato, izay tsy manana tany be. Ary nisy naniry avy hatrany, satria tsy nisy tany lalina.
13:6 Fa rehefa niposaka ny masoandro nitsangana, dia nalazo ireny, ary satria tsy nisy fakany, dia nalazo.
13:7 Na izany aza ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo ka nanempotra azy nitombo.
13:8 Kanefa ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary izy ireo vokatra voankazo: ny sasany avy zato heny, ny sasany enim-polo heny, ny sasany telo-polo heny.
13:9 Na iza na iza manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino. "
13:10 Ary ny mpianany nanatona Azy ka nanao hoe:, "Nahoana no itenenanao aminy fanoharana?"
13:11 Mamaly, dia hoy izy taminy: "Satria tsy nomena ho anareo ny hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, nefa tsy nomena azy ireo.
13:12 Fa na iza na iza manana, dia homena azy, Ary dia hanana be dia be. Fa na iza na iza no tsy, na izay ananany aza dia hesorina aminy.
13:13 Izany no antony, No itenenako aminy fanoharana: satria mijery, tsy mahita, ary mandre izy, fa tsy mandre, tsy mahazo an-tsaina.
13:14 Ary noho izany, ireny no tanteraka ny faminanian'i Isaia, izay nanao hoe:, 'Hearing, fa henoy, fa tsy hahafantatra; ka nahita, ho hitanao, fa tsy hahita.
13:15 Fa ny fon'ny 'ity vahoaka ity efa nanjary matavy, ary ny sofiny mandre be, ary efa nakimpiny ny masony, fandrao na oviana na oviana mba hahita ny masony, ary handre ny sofiny, ary hahalala ny fony, ary hiova fo, ary avy eo dia hahasitrana azy Aho. '
13:16 Fa sambatra ny masonareo, satria mahita, ary ny sofinareo, fa mandre.
13:17 Amen Lazaiko aminareo, Azo antoka fa, fa maro ny mpaminany sy ny olo-marina naniry hahita izay hitanareo, nefa Izy tsy hitany izany, ary naniry handre izay renareo, nefa izy ireo dia tsy hihaino izany.
13:18 Henoy, avy eo, ny fanoharana ny amin'ny mpamafy.
13:19 Amin'ny olona izay mandre ny tenin'ny fanjakana, fa tsy mahalala izany, tonga ny ratsy ary mitondra lasa izay nafafy tao am-pony. Dia izay nandray ny voa avy ny sisin-dalana.
13:20 Ary na iza na iza no nandray ny voa teo ambonin'ny toerana be vato, izany no izay mandre ny teny ka manaiky izany avy hatrany amim-pifaliana.
13:21 Nefa tsy manam-paka ao anatiny izy, toy izany ihany mandritra ny fotoana; avy eo, rehefa mitranga ny fahoriana sy fanenjehana noho ny teny, izy avy hatrany tafintohina.
13:22 Ary na iza na iza no nahazo ny taranany eo amin'ny tsilo, dia izay mandre ny teny, fa ny fiahiahiana izao fiainana izao sy ny fahadisoana rehetra ny harena suffocate ny teny, ary amim-pahombiazana izy nefa tsy misy voany.
13:23 Na izany aza tena, na iza na iza no nahazo ny voa ho tsara tany, dia izay mandre ny teny, ka mahalala; dia, ary noho izany dia mitondra vokatra, ary miteraka: ny sasany avy zato heny, ary ny iray hafa enim-polo heny, ary ny iray hafa telo-polo heny. "
13:24 Ary nanolo-kevitra fanoharana hafa koa taminy, nanao hoe:: "Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voa tsara tany an-tanimbariny.
13:25 Fa raha natory ny olona, dia avy ny fahavalony ka namafy voan-tsimparifary dia tonga ny vary eo anivon'ny, ary avy eo dia lasa nandeha.
13:26 Ary nony efa lehibe ny zavamaniry, ary efa namokatra vokatra, dia niseho koa ny tsimparifary.
13:27 Dia avy ny mpanompon 'ny raim-pianakaviana, manatona, hoy izy taminy:: 'Tompo ô, no aza mamafy voa tsara tany an-tanimbarinao? Ary ahoana moa no manana ahi-dratsy?'
13:28 Ary hoy Izy taminy:, 'Ny lehilahy no fahavalo no nanao izany.' Dia avy ny mpanompon nilaza taminy, 'Moa ve ny sitraponao mba handeha hanongotra sy hanangona azy?'
13:29 Ary hoy izy:: 'Tsia, fandrao in nanangona ny tsimparifary, Azonao atao koa ny hanongotra ny vary miaraka aminy.
13:30 Mamela na mba hitombo ambara-pihavin'ny fararano, ary amin'ny fotoam-pijinjana, Dia holazaiko amin'ny mpijinja: Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana ho, fa ny vary ho any an-trano fitehirizako aho. ' "
13:31 Ary nanolo-kevitra fanoharana hafa koa taminy, nanao hoe:: "Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voan-tsinapy izy, izay nalain'olona ka nafafiny tany an-tsahany.
13:32 ny, tokoa, ny kely indrindra amin'ny voa rehetra, kanefa rehefa nitombo, dia lehibe noho ny anana rehetra,, ka tonga hazo, betsaka dia avy ny voro-manidina ka mitoetra ao amin'ny rantsany. "
13:33 Ary nanao fanoharana hafa koa taminy: "Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira, izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny tsara toto intelon'ny famarana lafarinina varimbazaha, mandra, raha tsy mbola voaisy masirasira izany tanteraka. "
13:34 Izany zavatra rehetra izany tamin'ny fanoharana nolazain'i Jesosy tamin'ny vahoaka. Ary tsy niteny taminy afa-tsy ny fanoharana,
13:35 mba hahatanteraka izay nolazaina tamin'ny alalan'ny mpaminany, nanao hoe:: "Hiloa-bava hilaza fanoharana. No hotoriko izay efa nafenina hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. "
13:36 Avy eo, nandefa ny vahoaka, dia niditra tao an-trano. Ary ny mpianany nanatona Azy, nanao hoe:, "Lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny tsimparifary tany an-tsaha."
13:37 Mamaly, dia hoy izy taminy: "Izay mamafy ny voa tsara dia ny Zanak'olona.
13:38 Ary ny tanimbary dia izao tontolo izao. Ary ny voa tsara dia ny zanaky ny fanjakana. Fa ny tsimparifary dia ny zanak'ilay ratsy.
13:39 Ary ny fahavalo izay namafy izany dia ny devoly. Ary tena, ny fararano dia ny fahataperan'izao tontolo izao consummation; raha ny mpijinja dia ny anjely.
13:40 Noho izany, toy ny tsimparifary dia nanangona sy andoroana azy amin'ny afo, toy izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao consummation.
13:41 Ny Zanak'olona haniraka ny anjeliny, ary ireny dia hanangona avy ao amin'ny fanjakany rehetra izay mitondra amin'ny lalan-diso sy ireo izay miasa heloka.
13:42 Ary dia hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo, izay no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.
13:43 Ary ny marina ireo dia hamirapiratra tahaka ny masoandro, ao amin'ny fanjakan'ny Rainy. Na iza na iza manan-tsofina ho enti-mihaino, aoka izy hihaino.
13:44 The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man finds it, he hides it, ary, because of his joy, he goes and sells everything that he has, and he buys that field.
13:45 Indray, the kingdom of heaven is like a merchant seeking good pearls.
13:47 Indray, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato nalatsaka tao amin'ny ranomasina, izay miara-manangona trondro isan-karazany.
13:48 Raha efa feno, nahatan-hiala izy, ka nipetraka teo amoron-dranomasina, dia nifidy ny tsara ao an-karona, fa ny ratsy kosa nariany.
13:49 Dia tahaka izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao consummation. Ary ny anjely hivoaka ka hanavaka ny ratsy tsy ho eo amin'ny marina.
13:50 Ary dia hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo, any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.
13:51 Efa izany rehetra izany?"Hoy ireo taminy, "Eny."
13:52 Ary hoy izy taminy, "Koa, mpanora-dalàna rehetra tsara-dia nampianatra mikasika ny fanjakan'ny lanitra, dia tahaka ny olona, ny rain'ny fianakaviana, Izay manatitra avy amin'ny trano fitehirizana na ny vaovao sy ny taloha. "
13:53 Ary nony fa, rehefa nahavita Jesosy ireo fanoharana ireo, dia niala teo.
13:54 Ary tonga tany amin'ny taniny, dia nampianatra ny olona tao amin'ny synagoga, loatra ka gaga ka nanao hoe:: "Ahoana no fahendrena sy hery toy izany anie homba ity iray ity?
13:55 Io ve tsy zanaky ny mpiasa? Tsy ny reniny nantsoina hoe Maria, sy ny rahalahiny, James, ary Joseph, ary Simon, ary Joda?
13:56 Ary ny anabaviny, moa tsy eto amintsika avokoa? Noho izany, avy aiza no nahazo ity iray ity izany rehetra izany?"
13:57 Ary tafintohina taminy izy. Fa hoy Jesosy taminy:, "Misy mpaminany tsy hajaina, afa-tsy amin'ny taniny sy ny mpianakaviny ihany. "
13:58 Ary tsy miasa fahagagana maro teo, noho ny tsy finoany.